Play ady lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
ny lesona nianarany, ka mba hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto mikasika ny ady dia tokony ho voalahatra. Na ny zazalahy, momba ny tenanao, dia aza malahelo ny vokatra vaovao, izay afaka mitifitra basy, rehefa voafehiny ny maoderina, na ny bika aman'endriny Moyen Âge. Ary raha tsy ary, hahazo ny angovo tontolon'ny ka hanipy azy eo amin'ny fahavalo. Midradradradrà, dia vorona sy ny biby izay olona tena misy. Ny zava-dehibe indrindra ny manapa-kevitra eo amin'ny paikady, ataovy ny fisafoana, mahita ny tsy manan-kery ny fahavalo toerana, ka hanipy grenady, vato, biriky na voatabiha.
Sivilizasiona Wars: Master Edition
Ny tafika goavana
Great Air Ady
Ny fahirano ny tanàna
Survival Commander Frontline
Ady 5 (Combat Online)
Epic Ady 2: Tower Fiarovana
Age ny Steel
CommI War Mission IGI
Puzzle Quest Hara-magedona
Ady Lehibe 1941
Voixel Voxel 3D
Ady amin'ny tanks
Star Wars Rogue Boots iray eny an-kianja
Battle SWAT Vs mpikarama an'ady
Ady amin'ny Feodal
Lalao Online Rehetra Play ady lalao an-tserasera
craps-tserasera lalao ady
lehibe isan-karazany ny bitan'ny eo ny ady an-tserasera dia afaka mirehareha lalao ady. Afaka misafidy ny dikan-miaraka amin'ny fitaovam-piadiana sy ny sarina mahazatra toy ny tena ady, na mandefa ny misoratra anarana ao amin'ny tany mahafinaritra, izay no nitarika ny ady amin'ny alalan'ny majika eo amin'ny elves sy ny orcs. Azonao atao mihitsy aza ho caveman fa tsy mba hamela ny faritaniny solontena avy tamin'ny firenena hafa, fahaizana mifehy ireo Baton mamely. Play ny lalao momba ny ady dia mety ho iray na miresaka namana mba miaraka tsiroaroa mba hanao tena fandrosoana, nandresy ny fahavalo filaminana sy nanala ny faritra ny toeram-pitrandrahana.
Ny safidy ny fitaovam-piadiana
nandritra ny ady, araka ny hoe: ny fitaovana rehetra mora raisina. Amin'izao fivarotana virtoaly ho hitanao ny mazava sy mavesatra fitaovana, ny teknika samy hafa sy ny Toolbox:
ny basy marovava
Ny kibay farany fampandrosoana ny vato Age
Nandritra ny lalao momba ny Ady Lehibe II, ianao, dia hianatra momba ny mety de ny fahaiza-ireo fotoana ary hifehy ny fiara mifono vy sy fiaramanidina, nandalo ny asa fitoriana. Na ho tonga-tongotra, izay nifototra tamin'ny asa sarotra indrindra amin'ny tsara indrindra, mihazona ny fahavalo nony niherina. Manome sy ny andraikitry ny sniper izay tsy maintsy neutralize ny nitifitra ny Squad teboka afaka hifindra eo, nanosika ny anoloan'ny tsipika ny fahavalo, vykashivaya ny daharana.
Ankoatra ny kilalao Mini tselatra fitifirana tokony ho entina mivoaka ho any amin'ny asa mitovy, ohatra, mandeha amin'ny alalan'ny Misafotofoto ny mahita ny zavatra. Fitantanana Tanchico, mampiasa rindrina sy ho rakotra kirihitra, mba hamely tampoka ny fahavalo zavatra, ary avy eo dia mitsoraka any amin'ny fefy.
Ny fiaramanidina afaka manafina afa-tsy eo amin'ny rahona, nefa tsy hahita na inona na inona. Ve ilay "lavaka" sy ny "maty manome fitoerana" fa hikorontana ny fahavalo, ka tsy hamela ny tenany mba mandondòna avy. Ao amin'ny andraikitry ny parachutist mila ho tsara ao amin'ny voatondro teboka, ary nandritra ny nitsambikina indraindray tsy maintsy hitifitra tany lasibatra.
Azo atao ny mandeha any vitsivitsy taonjato maro lasa izay, mba hilalao ao amin'ny ady, niakanjo akanjo fiadiany. Nanafaingana na ny mifamadika amin'izany - hiaro ny trano mimanda dia midika hoe mampiasa ny misy
Medieval ady tsy latsa-danja noho ny lalao mahavariana momba ny Ady Lehibe II. Misy specificity sy ny fahafahana, ary ny tsy fantatra mahatonga liana foana. Amin'ny sasany dia nanolotra lohahevitra mitovy roa andalana - raharaha miaramila, miaraka amin'ny fampandrosoana ara-toekarena. Noho izany antony izany dia ny mampitombo ny ahy, fitrandrahana harena ankibon'ny tany loharanon-karena; mba hanao ny entana ilaina; barotra; no milaza fifanekena ny fifanarahana; miara-maneho ny fanafihana ny fahavalo.
Fantastic, mahatalanjona ady
voatery miady mafy ny hijanona, ary tsy ilaina, satria teo anoloan'ny mahavariana indrindra. Ary ny fandrahonana avy amin'ny lalina toerana, ka ny mivantana sy ny fitaovam-piadiana izy fijeriny. Mpanafika vahiny tonga amin'ny tanjona mba hanandevo ny tany, fa ny tena mahery fo dia tsy hamela izany. Mifidiana iray marika-sambo vaovao, tamin'ny laser fitaovana amin'ny basy, ary nanomboka hitsena ny loza. Ento midina kosmitov, tsy mamela azy ireo mba akaiky ny lalany mihodidina ny masoandro ny tany, ka tsy misy soritry ny azy. Ny ady dia nivory toy ny mponina eto amin'izao tontolo izao ny nofinofy. Dia hiady ho amin'ny hevitra ny tsara sy ny ratsy, mampiasa ny tsipelina, herin'ny natiora, sabatra sy tsipìka.
eo amin'ny ady amin'ny jiolahin-tsambo, indrindra fa rehefa eo an-tanan azy dia harena sarintany. Tarika rehetra te-hahazo ny firavaka, fa noho izany dia ilaina ny handrava ny mpanohitra. Ao amin'ny Mazava ho azy fa antsy sy basy, ny ranomasina famelabelarana ankehitriny fandripahana, ary rehefa nandray ny sambo manomboka melee. Miadia ho amin'ny farany, mba ho mpandresy amin'ny ady amin'ny piraty.